Hindiya: Koox haween ah oo muddo 20 sanno ah ilaalinaya keymo | Radio Himilo
Home / Deegaan / Hindiya: Koox haween ah oo muddo 20 sanno ah ilaalinaya keymo
Himilo FM –Koox haween ah oo ka kooban 75 qofood ayaa maalin kasta oo kamid ahayd 20-kii sanno ee la soo dhaafay waxay ilaalinayaan dhul keymo ah oo cabbirkiisu yahay 75 Hectare oo ku yaalla gobalka Odisha ee dalka Hindiya.
Sannadkii 1999-kii, gobalka dhaca bariga Hindiya ee Odisha waxaa ku dhuftay duufaan xooggan oo burburisay guryaha dadka, waxayna dad badan ka dhigtay cunto la’aan dhowr maalin laakiin dadka ku nool tuulada yar ee Gundalba waxay xaqiiqsadeen inay ku badbaadeen keymaha waaweyn.
Tan iyo xilligaasi waxay tuulaleyda go’aansadeen inay awood kasta ku difaacaan keymaha. Iyadoo ragga ku mashquuleen dib-u-dhiska tuulada burburtay ayaa mas’uuliyadda ilaalinta keynta waxaa dusha saartay koox haween ah.
Waxay durba dhiseen koox iyaga oo roondoonyin ka sameeya gudaha keymaha, waxayna baacsanayeen kooxaha jara geedaha 20-kii sanno ee la soo dhaafay.
“Hindiya iyo dhammaan caalamka oo dhan waa uu ka war qabaa duufaanta laakiin waxaan xaqiiqsanay in keynta lagu badbaadayo, waxaana ballan qaadnay inaan ilaalin doono,” ayay tiri Charulata Biswal oo 52 jir oo la hadashay warbaahinta Mongabay-India.
Sannadkii 2001-dii, inka badan 70 haween ah ayaa sameeyay guddiga ilaalinta keymaha oo laga soo xulay guri kasta oo tuulada ku yaalla.
Previous: Hal arrin oo aan marnaba lagu sameyn karin gudaha diyaaradda!
Next: Oggow kooxda uu tababare u noqon karo Jose Mourinho